किन छाडिन् कोमल वलीले राप्रपा ? सोमबार एमालेमा प्रवेश गर्दै (खास खुल्लासा) - Janata Times
किन छाडिन् कोमल वलीले राप्रपा ? सोमबार एमालेमा प्रवेश गर्दै (खास खुल्लासा)
संजिब दाहाल \_काठमाडौं
राप्रपाको केन्द्रीय सदस्य भएको एक बर्ष नवित्दै एकाएक चर्चित गायिका कोमल वली एमालेमा प्रवेश गर्ने तयारी भएको नेकपा एमालेले जनाएको छ । गत बर्षदेखी मात्रै रेडियो नेपालको जागिर राजिनामा दिएर पूर्णकालीन राजनीतिमा हुम्मेकी हुन् ।
को को प्रवेश गदैछन् एमालेमा ?
राप्रपा आपसमा फुटसंगै राप्रपाबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य कोमल वलीसँगै दाङका व्यवसायी एवं कांग्रेस नेता बलिभद्र राना सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दाङको घोराहीमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरेर एमालेमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् । राना र वलीलाई एमाले प्रवेश गराउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दाङमा जाने एमालेले जनाएको छ ।
ठुलै संख्यामा एमालेमा आउदैं
कोमल ओलीले परिवारीक रुपमा छलफल गरेसंगै यसबीचमा एमाले प्रवेशका लागि माधव नेपाल लगायतका पार्टी नेताहरुसँग छलफल गरेकी थिइन् । राप्रपा विभाजनपछि निराश बनेकी वलीले एमालेका नेताहरुसँग छलफल अघि बढाएकी हुन् । उनले यसबीचमा एमाले प्रवेश गर्नेहरुको एउटा सूची नै बनाएकी छिन् ।
यसरी सभ्भव भयो एमाले प्रवेश गराउन
राप्रपामा केन्द्रीय सदस्य जितेर पनि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको गुनासो गर्दै एमालेमा प्रवेश गर्न लागेकी वलीले पार्टीमा पाइने जिम्मेवारीका बारेमा समेत नेताहरुसँग छलफल गरेको बताइएको छ ।
कोमल वलीले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलमार्फत एमाले प्रवेशका लागि वार्ता चलाएकी हुन् । पोखरेल र वली दाङको एउटै क्षेत्रका हुन् । दाङको तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका सहित बहुसंख्यक स्थानीय तह जितेपछि एमाले दाङमा प्रभाव बढाउने रणनीतिमा छ । कोमल वली र बलिभद्र रानालाई एमाले प्रवेश गराउँदा चुनाव जित्न सहज हुने देखेर एमाले नेता पोखरेल खटिएका थिए ।
दाङका व्यवसायी एवं कांग्रेस नेता माओवादी नेता बलिभद्र राना माओबादी केन्द्रका नेता एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले माओवादी प्रवेश गराउन धेरै जोड बल गरेका थिए । विभिन्न समयमा दाङ र काठमाडौंमा राणासंग छलफल गरेपनि सार्थक हुन् सकेको थिएन्न् ।
कोमल वलीलाई के जिम्मेवारी दिदैंछ ?
कोमल वलीलाई एमालेले प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष वा प्रतिनिधिसभाको समानुुपातिकतर्फको सांसद बनाउने तयारीमा गरेको छ एमाले सचिब प्रदिप ज्ञवालीले जनता टाइम्ससंग कुरा गदै भने जताबाट भए पनि कोमल अब एमालेबाट सांसद बन्ने सम्भावना छ ।
कोमल वलीलाई राप्रपाको शक्ति कमजोर भएपछि एमालेमा लागेको आरोप
उनी राप्रपामा पनि सांसद पाइने आशमा प्रवेश गरेकी थिइन् । तर राप्रपाको शक्ति कमजोर भएपछि उनले त्यहाँबाट आफ्नो भविश्यको सम्भावना नदेखेर दलबदल गरेको राप्रपाका एक नेताले आरोप लगाए ।
यस विषयमा कोमल वलीलाई प्रश्न गर्दा जो कोहीले बलेको आगो नै ताप्छन् निबेको आगो तप्ने कस्लाई मन हुन्छ र ? भन्ने उल्टै प्रश्न गरिन् । घुमाउरो पारले वलीले भनिन् म एउटा सच्चा राजनैतिक गरेर दाङका जनतालाई न्याय दिने छु ।
नायिका रेखा थापा राणा समूहमा
गत सालमात्रै एक साथ गायिका कोमल वली र नायिका रेखा थापा एकसाथ राप्रपामा प्रवेश गरेर केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । राप्रपा फुटेपछि वली कमल थापा समूहमा थिइन् भने नायिका रेखा थापा चाहिँ पशुपतिसमशेर राणा समूहमा लागेकी छिन् । ओली एमालेमा प्रवेश गरे पनि रेखाले भने पार्टी परिवर्तनको निर्णय गरेकी छैनन् ।
(तस्विर अनलाइन खवरबाट साभार)
September 23, 2017मा प्रकाशित
त्रिशूली बस दुर्घटना : ३० पुग्यो मृतकको संख्या, २९ को सनाखत, ६४ यात्रु रहेको घाइतेको बयान
रोपाई जात्रामा पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार र स्थानीय यसरी रमाए !
दलितसँग विवाह गरेकै कारण शोकको घडीमै टाढिए छिमेकी
सुरक्षाकर्मीकै राशनमा ठुलो बिभेद : सेना सशस्त्रलाई बढी, सवैभन्दा बढी पेलिने नेपाल प्रहरीलाई कम